Dongeng snow white and the huntsman dalam bahasa Malagasi – qnc jelly gamat asli terbaik
Dongeng snow white and the huntsman dalam bahasa Malagasi
11 Januari 2017 20 Desember 2016 qncjellygamatasliterbaik
Indray andro hono nisy nipetraka ny mahafinaritra tsara andriambavy amin’ny hoditra sy ny maso manga. Tsara tarehy izy fa atao hoe Snow White. Ny reniny dia maty rehefa Snow White dia ny zaza sy ny rainy manambady indray izy. Zavatra tsy vadin’ny mpanjaka, Tena tsara tarehy izy, fa loza ihany koa ny tena.
Ny ratsy fanahy renikely te ho vehivavy tsara tarehy indrindra amin’ny fanjakana sy matetika izy no manontany ny fitaratra majika, “Mirror! Fitaratra teo amin’ny rindrina! Iza no tsara tarehy indrindra azy rehetra? “Ary ny mahagaga fitaratra dia hoe:” Ianao no, Ry Mpanjaka! “Fa indray andro, ny fitaratra namaly hoe:” Snow White dia ny tsara tarehy indrindra azy rehetra! “Ny ratsy fanahy, vadin’ny mpanjaka, dia tezitra indrindra sy nialona an’i Snow White. Izy baiko ny Huntsman mba hitondra Snow White any amin’ny ala sy hamono azy. “Tiako ho hitondra indray ny fony,” hoy izy nanome baiko. Fa rehefa tonga ny Huntsman ny ala Snow White, dia naka mamindra fo aminy ka nametraka azy maimaim-poana. Dia namono ny diera ary naka ny am-po ny ratsy fanahy mpanjakavavy, ary nilaza taminy fa efa namono Snow White. Snow White nirenireny tany anaty ala nandritra ny alina, mitomany.
Ary rehefa maraina ny andro, dia mba nankao amin’ny trano rantsan-kazo kely ka niditra tao. Nisy tsy misy ao, fa izy kosa nahita fito takelaka teo ambony latabatra sy fandriana kely fito tao amin’ny efitrano fandrian. Izy tena tsara nahandro sakafo sy nanadio ny trano sy ny reraka, farany dia natory tamin’ny iray amin’ireo fandriana kely. Amin’ny alina, fito dwarfs izay nonina tany amin’ny trano rantsan-kazo tonga tao an-trano ka nahita Snow White matory. Rehefa nifoha izy ka nilaza tamin’izy ireo ny tantarany, ny fito dwarfs nangataka azy hitoetra tao aminy. Rehefa dwarfs teo izy, Snow White dia hanao matsiro sakafo ho azy ireo. Ny dwarfs tia azy, ary nikarakara azy. Isa-maraina, rehefa nandao ny trano, Dia nandidy azy na oviana na oviana mba hanokatra ny varavarana ho olon-kafa.
Mandritra izany fotoana izany, tao an-dapa, ny ratsy fanahy vadin’ny mpanjaka nanontany hoe: “Mirror! Mirror amin’ny Iza no tsara tarehy indrindra avy aminy.
Namaly ny fitaratra, White no tsara tarehy indrindra amin’ny rehetra! Monina miaraka amin’ny fito dwarfs any anaty ala! “Ny ratsy fanahy dia tezitra renikely. Izy raha ny marina ny mpamosavy nahafantatra ny fomba hanaovana ody potions. Izy izao nanao poizina potion ka natsobony ny namirapiratra paoma mena ao. Ary dia nody ny tenany ho antitra ny vehivavy tantsaha ary nandeha tao anaty ala ny paoma. Izy nandondòna teo amin’ny trano rantsan-kazo varavaran’ny ka nanao hoe: “Pretty zazakely! Avelao aho in! Jereo izay ho anareo! “White nilaza hoe:” Izaho no tena miala tsiny, antitra ramatoa, dia tsy afaka hamela anareo in! Dwarfs fito no nilaza tamiko mba tsy hiresaka amin’olon-tsy fantatra! “Saingy avy eo, Snow White nahita ny paoma mena mamirapiratra, dia namoha ny varavarana. Ny ratsy fanahy mpamosavy nanolotra azy ny paoma ary rehefa naka manaikitra mahantra Snow White nianjera-tory. Renikely ny ratsy fanahy dia niverina ho any an-dapa, ary nanontany ny fitaratra, “Mirror! Fitaratra teo amin’ny rindrina! Iza no tsara tarehy indrindra azy rehetra? “Fitaratra namaly hoe:” Hianao, Ry Mpanjaka! “, Ary tena faly izy.
Rehefa tonga ny fito dwarfs an-trano mba hitady Snow White eo amin’ny tany, izy ireo tena tezitra. Mitaraina izy mandritra ny alina, ary avy eo dia nanao ny fitaratra vatam-paty ho an’ny Snow White. Ary nitandrina ny vatam-paty teo anoloan’ny trano rantsan-kazo. Indray andro, nandeha Prince mahafatifaty lasa ny trano rantsan-kazo ary nahita Snow White mandry ao amin’ny vatam-paty. Ary hoy izy tamin’ny dwarfs, “My! My! Izy no tsara tarehy! Te-hanoroka azy! “Dia nataony. Avy hatrany, Snow White nahirany ny masony. Velona indray izy! Ny Prince sy ny fito dwarfs faly be. Prince mahafatifaty Nanambady an’i Snow White ka nitondra azy ho any an-tranony, ary niaina taorian’ny sambatra mandrakizay.
Tulisan SebelumnyaDongeng snow white and the huntsman dalam bahasa Magyar
Tulisan SelanjutnyaDongeng snow white and the huntsman dalam bahasa Malta